Dowladda Turkiga oo si kulul uga hadashay weerarkii dhalinyarada lagu laayey ee ka dhacay Muqdisho.
November 28, 2020 Xuseen 2
Puntlandtimes (Muqdisho)-Dowladda Turkiga gaar ahaan wasaaradda arrimaha dibada ee dalkaasi ayaa si adag uga hadashay qaraxii ismiidaaminta ahaa ee xalay ka dhacay Muqdisho, islamarkaana lagu dilay sideed kamid ah dhalinyarada Soomaaliyeed.
War qoraal ah oo ka soo baxay wasaaradda Arrimaha dibada ee Turkiga ayaa lagu sheegay in ay si weyn u cambaareynayso weerarkaasi, waxaana ay ugu baaqday dhinacyada Soomaalida inay u midoobaan dagaalka ka dhanka ah kooxda Alshabaab.
“Waxaan si adag u cambaareyneynaa weeraradan argagixiso waxaana u tacsiyeyneynaa shacabka iyo walaalaha ah ee Soomaaliyeed. Waxaan u rajeynaynaa naxariista Eebbe kuwa naftooda ku waayey, waxaan tacsi u direynaa qoysaska iyo ehelada dhibanayaasha waxaanan u rajeynaynaa caafimaad deg-deg ah kuwa dhaawacmay” ayaa lagu yiri warka kasoo baxay dowladda Turkiga.
Allaha ha unaxariistee waxaa isbitaalka xoogga dalka ka dhacay aaska siddeed dhalinyaro ah oo xalay ku dhintay Qarax Ismiidaamin oo lala beegsay maaqayad ama goob lagu nasto ee loo yaqaano Gelato Devino ee ku taalla ka soo horjeedka xarunta Sahal ee wadada garoonka Aadan cadde.
WANKA MACASHA II QABO ANIGUNA AAN GAWRACO!
Yaa Nabar iyo Naxdin Ummada ka Qabta? says:
Fashilka kooxda Nabar iyo Naxdin
4 sano oo qarax joogto ah